बर्ड फ्लू के हो ? यसरी बच्न सकिन्छ बर्ड फ्लूको संक्रमणबाट - Dainik Nepal
दैनिक नेपाल २०७६ वैशाख १९ गते १२:२९
काठमाडाैँ । यसअघि कुखरा र पन्छीमा मात्र देखिने गरेको बर्ड फ्लू नेपालमा पहिलोपटक मानिसमा पनि देखिएको छ ।
बर्ड फ्लूको संक्रमणका कारण काभ्रेमा एक युवकको मृत्यु भएसँगै मानिसमा पनि बर्ड फ्लू भेटिएको पुष्टि भएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरि यसको औपचारि जानकारी गराएको छ ।
बर्ड फ्लू के हो ?
एभियन इन्फ्लूएञ्जा वा एभियन फ्लूलाई बर्ड फ्लू भनिन्छ । यो रोग विशेषगरी चरा प्रजातिबाट फैलिने गर्दछ । संक्रमित वा मरेको कुखुराको सम्पर्कमा रहँदा मानिसलाई सर्ने खतरा हुन्छ । यही रोग मानिसमा सर्दा पनि यसलाई बर्ड फ्लू नै भनिन्छ । बर्ड फ्लूमा एच फाइभ एन वान नामक भाइरस हुने गर्दछ ।
यो भाइरसको पूरा नाम ‘हाइली प्याथोजोनिक एभियन इन्फ्लूएञ्जा’ राखिएको छ । बर्ड फ्लूको भाइरस विशेष गरी कुखुराको मासु, प्वाँख, सिंगान, र्‍याल, सूली, अण्डा, अण्डा राख्ने क्रेट आदिको सम्पर्कबाट सर्दछ । रोगी कुखुरा पानीमा तैरीरहेको अवस्थामा समेत मानिसलाई सर्ने खतरा हुन्छ ।
बर्ड फ्लू बारे जान्नुभन्दा पहिला तपाईलाई भाइरस कति प्रकारको हुन्छ भनी जानकारी राख्नु जरुरी छ । यसबारे सम्पूर्ण जानकारी भएपछि उपचारमा सहयोग मिल्ने छ । सामान्यतया भाइरस तीन प्रकारको हुन्छ । ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ प्रकारको भाइरसमध्ये ‘ए’ प्रकारको भाइरसलाई खतरनाक मानिन्छ । यो भाइरस मानिस र पंक्षी दुवैको माध्यमबाट फैलिन सक्छ । त्यसैले बर्ड फ्लूलाई ‘ए’ भाइरस अन्तर्गत राखेको हो ।
बर्ड फ्लू एक प्रकारको स्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोग हो । यो रोग यति धेरै खतरनाक हुन्छ कि संक्रमित भएका व्यक्तिको पनि मृत्यु हुन सक्छ । त्यसैले यसलाई सामान्य रुघाखोकीज्वरोका रुपमा लिनु हुँदैन । बर्ड फ्लूबाट बच्चे उत्तम उपाए संक्रमित पंक्षी र रोगी व्यक्तिबाट टाढै रहनु हो । साथै स्वस्थकर खानपानमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
उनीहरूका अनुसार बर्ड फ्लुको सङ्क्रमण देखिनासाथ नेपालमा मात्रै नभई विश्वको जुनसुकै ठाउँमा चालिने कदम भनेको सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम नै हो । र, त्यसका लागि सङ्क्रमित पशुपक्षी तथा तिनका उत्पादन लगायत सामग्रीलाई नष्ट गरिन्छ । पुश सेवा विभागका अधिकारीहरुका अनुसार यसको भाइरसले स्वरूप परिवर्तन गर्ने धेरै अवसर नपाओस् भनेरै जहाँ देखियो त्यही नष्ट गर्ने सबैतिरको अभ्यास हो।
तर प्रश्न उठ्छ- सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने पटकपटक प्रयास भइरहँदा पनि किन बर्ड फ्लुको भाइरस ब्युँतिरहन्छ ? डा. शिशिर भण्डारी भन्छन्, आनुवंशिक गुण फेर्न सक्ने सो भाइरसको विशेषता नै त्यसको अस्तित्वको निरन्तरताको प्रमुख कारण हो।”
सरल भाषामा भन्नुपर्दा बर्ड फ्लुको भाइरसले आफूले मार हान्ने पशुपक्षीको शरीर अनुकूल आफूमा क्षमताको विकास गर्न सक्छ। अर्थात् कुखुरामा हुँदा त्यसको शरीरमा बाँच्न सक्नेगरी भाइरसले आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ भने हाँसमा हुँदा त्यसको शरीरअनुकूल बन्न सक्छ।”
-नाक बाट पातलो पानी बग्ने
-ज्वरो आउने र टाउको दुख्ने
-कमजोर भएको अनुभव हुने
-पेटको तल्लो भागमा दुख्नु
-भोक नलाग्ने र बढ्ता तिर्खा लाग्ने
-श्वासप्रश्वासमा असामान्य परिवर्तन हुने
-थुकदा रगत देखिनु
-घाँटीमा जलन हुने
सरकारकाे निर्णयहरु यस्ता छन्
प्रहरीमा ५१ करोडको ठेक्काले खैलाबैला, यसबारे के भन्छन् प्रवक्ता पोखरेल ?